Qiimeynta Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya | Keydmedia
Qiimeynta Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya
Shirka Dhuusamareeb ayaa ah rajada ugu dambeysay ee xal u helida Khilaafka siyaasadeed ee Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxay Soomaaliya hadda taagan tahay wado Isgoys ah maadaama mudo-xileedka dastuuriga ee Baarlamaanka iyo Xukuumadda uu sii dhamaanayo, iyadoo aan la ogeyn jihada ay u dhaqaaqin doonaan madaxdeeda is khilaafsan.
Kala qeybsanaanta siyaasadeed jirta waa midii ugu xumeyd oo dalka soo marta, taasoo ka dhalatay xukunka kaligii-talisnimada ee uu wado Madaxweyne Farmaajo, oo tan iyo markii uu Xafiiska yimid Febuary 2017 ka gaabiyay abuurida jawi wada-shaqeynayd oo uu la sameeyo Maamullada iyo Xisbiyada Mucaaradka.
Villa Soomaaliya waxay ku guuldareysatay inay sii wado Shirarkii Gollaha Amniga Qaranka, ee looga doodi jiray arrimaha taagan iyo kuwa soo socda sidii la isaga kaashan lahaa, waxayna taaso keentay inay Soomaaliya doorashadeedii baaqato, sababo la xiriira diyaargarow iyo wadashaqeyn la'aan.
Dhowr jeer ayuu Farmaajo shirar ku casuumey Madaxda dowlad Goboleedyada, laakiin waa la qaadacay markii uu jebiyay heshiisyo hore oo ay gaareen. Balan-furka Madaxweynaha ayaa abuurtay kalsooni xumo soo dhex-gashay Saamileyda Siyaasadda.
Hadda waxaa isha lagu wada hayaa Kulanka July 9 Dhuusamareeb uga furmaya Maamullada oo kaliya, kaasoo la filayo inay ku gaaraan hal mowqif oo ku aadan doorashooyinka iyadoo la filayo kadib shirkooda inay la kulmaan Farmaajo, iyadoo wada hal ajando.
Soomaaliya waxaa soo wajahay hubanti la'aanta mustqablkeeda, oo mugdi uu geliyay Farmaajo, kadib markii uu lasoo baxay astaamaha kaligii-taliska, taasoo ah waxa keenay inuu dalka ku dhaco qaran-burburka.
Dhaqaalaha dowladda ee loogu adeegi lahaa Shacabka iyo Ciidanka qaranka ayuu Farmaajo u adeegsaday inuu kula dagaalamo siyaasiyiinta feker ahaan dhaliila dowladiisa, isagoo sidoo kale isku dayaya inuu maamullada Federaalka meesha ka saaro.